कुनै पनि मलाई सिधा कसरी सकेसम्म ब्याकलिङ्कहरू जोड्न सिकाउन सक्छु?
वास्तवमा, यो तपाईंको वेबसाइटमा अन्य लिङ्क सिर्जना गर्न वा ब्लग सिर्जना गर्न गाह्रो छ जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ. यो सादा अंग्रेजीमा राख्नु, लिङ्क भवनमा SEO एक पारस्परिक लाभकारी सम्झौताको लागि छ. सरल सर्तहरूमा, यसको अर्थ तपाइँको आफ्नै पृष्ठमा राखिएका ब्याकलिंकहरू प्राप्त गर्दै र फर्किनाले तिनीहरूलाई दिइन्छ. वास्तवमा, गुणस्तर लिङ्क निर्माण रणनीतिको लागी आवेदन सम्भवतः एसईओ मा तपाइँको सामान्य रणनीति बढाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।. तर तपाईंले देखाउन अघि ब्याकलिङ्कहरू कसरी जोड्न - सजिलै र सजिलैमा - मलाई सावधानीको एक शब्द दिन दिनुहोस्. ध्यान राख्नुहोस्, कि निम्न लिङ्क निर्माण सुझावहरू यस समयमा 100% मान्य छन्. तर त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि आज हामीलाई ठीक बनाउँछ आज कलको लागि सबै नै रहनेछ. त्यसोभए, तलको लागि मात्र व्यावहारिक चरणहरू मान्य छन्. म आशा गर्दछु कि तपाईलाई बुझ्न मद्दत गर्नेछ कि तपाईको वेबसाइट वा ब्लगमा ब्याकलिङ्कहरू कसरी थप्न सकिन्छ - कुनै पनि नगद नगद खर्च बिना, केवल तपाईंको समय र प्रयास तिर्नुहोस्।.
ब्लग पोस्टिंग अनुसूची
ब्लग पदों को निर्माण गर्न केहि बहुमूल्य backlinks कमाई केहि असाधारण केहि छैन. तपाईलाई यहाँ आवश्यक छ धेरै लेख्न र यो प्राय: गरौं. निश्चित गर्नुहोस् कि प्रमुख खोजी इन्जिनहरूले सफलतापूर्वक तपाईंको उपस्थितिलाई ध्यान दिनेछन् - तपाईंको ब्लग सामग्रीको साथ आवधिक अद्यावधिकहरू डेलिभर गर्न नबिर्सनुहोस्. म व्यक्तिगत रूपमा मात्रा भन्दा कम गुणस्तरको सुझाव दिन्छु. मेरो मतलब छ कि दुई या तीन हत्या लेख लेख बिल्कुल प्रगति गर्न को लागी केहि अतिरिक्त backlinks को जोडने को लागी केहि छ. र सम्झनुहोस् - प्रत्येक ब्लग पोष्टको लागि तपाईंको मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू प्रयोग गर्न एक राम्रो अवसर हो. अनि निस्सन्देह, खोजशब्दहरु लाई अधिकृत गर्न कोसिस गर्नुहोस, जब सम्म तपाईं आफ्नो लेखहरु लाई स्पैम जस्तो नहीं देखना चाहिये. यसो गर्दा, लिङ्क भवनमा अतिथि ब्लगिङ, उत्पादन उत्पादन समीक्षाहरू, र स्मार्ट टिप्पणीहरूमा कम्तीमा लगानी गर्न विचार गर्नुहोस् कम्तीमा तपाईको व्यापारिक उद्योगको शीर्ष-प्रासंगिकताको तेस्रो-पक्ष स्रोतहरू वा छलफल छलफल.
एंकर टेक्स्ट र खोजशब्द रिसर्च
उचित खोजशब्द अनुसन्धान चलिरहेको छैन भनेर सम्भव छैन शायद तपाइँको SEO मा सुधार गर्न सुरु गर्ने पहिलो स्थान हो।. लिङ्क निर्माणको लागि विशेष गरी, तपाइँलाई थाहा छ कि कसरी दायाँ एंकर टेक्स्टसँग ब्याकलिङ्कहरू थप्न सकिन्छ. स्थानमा सबै कुरा प्राप्त गर्न, Google एडवर्ड्स वा कुनै अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न को लागी पूर्ण खोजशब्द विश्लेषण चलाउन संकोच नगर्नुहोस् - यो समय कडा निर्माण प्रयोजनका लागि सहि. गंभीरतापूर्वक, जब यो एक पूर्ण फिटिंग लंगर पाठ को आकार दिन को लागी, उपन्याटिक्स को अर्थ छ. उदाहरणका लागि, बरु साधारण शब्दहरू जस्तै "सोशल मिडिया मार्केटिङ लागत" जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ जस्तो. यद्यपि, ढोका सधैं तपाईंको ट्राफिक बढाउनको लागी खुला छ - एक मात्र शब्द परिवर्तन गर्दै, वा आदर्श रूपमा फिटिंग लिनु.
ठोस वेबसाइट आर्किटेक्चर र इन्टरलिङ्किंग
सधैँ केहि आन्तरिक लिङ्कहरू तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगको विभिन्न भागहरू मार्फत संकेत गर्दै. तपाइँ सबै भ्रमण गरिएका पृष्ठहरूमा लिङ्कहरू थप्न सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंको गृहपृष्ठ वा ल्यान्डिङ पृष्ठहरूको साथमा एक उचित जडान सेट गर्नुहोस्. निस्सन्देह, यो प्रकारका लिङ्कहरू Google को खोजी रेटिङ्का साथ केही गर्नको लागि कम्तीमा सीधा. यद्यपि, यो अझै पनि एक धेरै राम्रो मौका छैन न केवल केहि अतिरिक्त लिङ्क निर्माण गर्न को लागि तर एक मजबूत वेबसाइट आर्किटेक्चर मा योगदान. जे होस् पनि, तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगहरू एकदम सुलभ र प्रयोगकर्ताको अनुकूल ठाउँमा विकसित गर्दै एक राम्रो गठन निर्णय हुनेछ. आखिर, तपाईं एक लामो दौडमा सम्मानित उच्च रैंकिंग स्थितिबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ - किनभने किनकि तपाईको वेबसाइट वास्तुकला सँभालो छ र हरेक प्रयोगकर्तालाई स्वागत छ भन्छन् त्यहाँ त्यहाँ पुग्यो Source .